YANGON, NAY PYI TAW INTERNATIONAL AIRPORTS AND ASIA WORLD PORT TERMINAL SUPPORT VOICES FOR MOMOS | Yangon Aerodrome
Asia World Company subsidiaries ramp up public education on illegal wildlife trade
YANGON, 23 February 2018 –
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနေဖြင့် WWF-Myanmarမှဆောင်ရွက်သော “မိုမိုတို့အတွက် ရင်တွင်းစကားသံ”လှုပ်ရှားမှုတွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ကူညီပံ့ပိုးခွင့်ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်လျက် ရှိပါသည်။
လူထုအသိပညာပေးရေးအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် ကမ္ဘာ့တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနေ့ နှင့်တိုက်ဆိုင်စွာ ကိုအာကာကျော်၏ We Love Elephantsလူထုအနုပညာပြပွဲကို မတ်လသုံးရက်နေ့မှစတင်၍ ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ခရီးသည်များခေတ္တနားနေစောင့်ဆိုင်းရာနေရာများဖြစ်သော နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းများ ဆိုက်ကပ်ရာ Terminal 1၊2နှင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများဆိုက်ကပ်ရာ Terminal 3တို့တွင် အရွယ်အစားကြီးမားလှသည့် စက္ကူဆင်ရုပ်ကြီးခြောက်ရုပ်ကို ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Yangon International Airport (YIA) is now proudly on board asacorporate partner to support VOICES FOR MOMOS campaign by WWF-Myanmar.
As part of the public education program, YIA will be featuring Arker Kyaw’s “We Love Elephants” public art exhibition,6supersized paper-mache MOMOS are on display from 3rd March till the end of Thingyan at Terminals 1,2 and Terminal3in conjunction with World Wildlife Day.
Download Press Release[MM]
Download Press Release[ENG]
By Yangon Aerodrome| 2018-02-28T17:12:19+00:00	February 24th, 2018|